Farmaajo oo caawa ka dhoofay Muqdisho, halkuu aaday? - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo caawa ka dhoofay Muqdisho, halkuu aaday?
Farmaajo oo caawa ka dhoofay Muqdisho, halkuu aaday?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ka dhoofay Muqdisho, isagoo ku sii jeeda dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo, kadib markii sida la sheegay uu casuumaad ka helay madaxweynaha dalkaas Felix Tshisekedi.
Ilo ku dhow Villa Somalia ayaa Caasimada Online u sheegay in safarka Farmaajo uu la xariiro wadahadallo la filayo in laga dhex bilaabo hoggaamiyeyaasha Soomaaliya iyo Kenya, maadaama labada dal ay si toos ah xiriirka isugu jareen.